Sida loo dalbado Card a Green | USAHello | USAHello
kaarka cagaaran A (kaarka deganaanshaha joogtada ah) waa kaar muujinaya aad tahay xalaal joogtada ah ee USA ka degan. Qaxootiga waxaa looga baahan yahay sharci ahaan inay dalbato ka dib markii ay ku nool USA ay muddo hal sano ah. Haddii aad tahay asylee ah, sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad dalbato hal sano ka dib. Baro sida qaxootiga, Entry Level, iyo dadka kale ee muhaajiriinta ka dalban kartaa.
Si aad u codsato kaarka cagaaran, qofka waa in aad xaq ugu yeelato in sidaas la sameeyo iyada oo loo marayo codsi ah oo sababaya. Nidaamkan waxaa adag, iyo xaaladda aad ku sugan USA waxaa laga yaabaa in halis haddii codsi la diido. Sababtan awgeed, waxaa muhiim ah in qareen la hadasho ka hor inta aadan codsan. Waxaa jira qareenada iyo ururada ee wadanka oo dhan, kuwaas oo kaa caawin doona.
dadka kale ee muhaajiriinta
Si aad u codsato heerka deganaanshaha joogtada ah, xeraysid foomka I-485, Codsi aad isku Diiwaangeliso Degaan Joogto ah ama Aqoonsi Hagaagsan. Waa inaad kaloo haysataa dhakhtar USCIS dhamaystiran Form I-693 caddayn muujinaysa aad baaritaan caafimaad. Qaxooti ahaan, hadda ma jiraan wax lacag si ay u gudbiso foomkan. Waad awoodaa bartaan oo soo bixi Form I-485. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in bartaan oo soo bixi Form I-693.
Haddii aad tahay qaxooti, fadlan si aad caawimaad u-dejinta ayaa aad codsato in aad la qabsiga xaaladda.
warqadaha Legal waxay noqon kartaa mid aad u adag si ay u dhamaystiraan oo aan gargaar ka mid ah qareen. Haddii aadan haysan hay'adda dejinta ama socdaalka xirfadeed aad si ay kuu caawiyaan, fadlan ka heli caawimaad sharciyeed ka hor intaadan dalban.
Masuuliyaadka haysta kaadhka cagaaran
Lahaanshaha green card siinayaa xuquuq aad degan USA. Laakiin waxaa jira mas'uuliyadaha, aad. Waa arrin aad u muhiim ah in la ogaado waxa waajibaadka waa kuwan. USCIS ayaa sheegay in sida dagane joogto ah, waa inaad:
adeeco sharciyada ee USA iyo sharciyada gobolka iyo kuwa maxalliga ah
canshuurta file celinta iyo canshuurta mushaharka
diiwaan ah Selective Service haddii aad tahay da 'lab 18 iyada oo loo marayo 25.
Dalbo kaadhka cagaaran guur